မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Honeymoon to New Zealand Day4: Out & About in Waiheke Island (Onetangi Beach)
Honeymoon to New Zealand Day4: Out & About in Waiheke Island (Onetangi Beach)
၅ရက် မေလ ၂၀၁၅ (အင်္ဂါနေ့)
နယူးဇီလန် မြောက်ပိုင်းကျွန်းက အကြီးဆုံးမြို့ အော့ကလန်း ကိုသွားဖြစ်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒိကနေ အလွယ်တကူသွားလို့ရတဲ့ Waiheke ကျွန်းလေးကို မပါမဖြစ် အချိန်ပေးဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အော့ကလန်းနဲ့ နီးပေမဲ့ သူက မတူတဲ့ ခံစားချက်တွေပေးသလို အပန်းဖြေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပင်လယ်ကမ်းခြေအရသာ ခံစားချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တောလန်းလျှောက်၊ ဝိုင်စိုက်ခင်းတွေပေါ်ဖြတ်ပြီး Zip Line စီးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် လည်လို့ကောင်းတဲ့ ကျွန်းလေးပါ။
မဗေဒါတို့ရဲ့ မူလခရီးစဉ်အရ တစ်ညပဲ အိပ်ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တုန်းကတောင် စိတ်ထဲ နောက်ထပ် တစ်ညအိပ်ချင်စိတ် ကျိတ်ပြီး ဖြစ်မိခဲ့လို့ထင်တယ် နောက်ထပ်တစ်ည ထပ်နေဖို့ အကြောင်းက ဖန်လာတယ်။ အစကတည်းက ၂ညနေမယ်သာ စဉ်းစားခဲ့ရင် ခုလို Accident တောင် ဖြစ်ပါ့မလားလို့ အတွေးခေါင်မိတယ်။
Just read the explanation
Heartwarming “The Oyster Inn”
အင်္ဂါနေ့ မနက် မနက်စာကိုတော့ တည်းခိုခန်းနဲ့ တွဲရက် စားသောက်ဆိုင်လေးမှာပဲ စားဖြစ်ပါတယ်။ တခြား ဘယ်ဧည့်သည်မှလဲ မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ၂ယောက် အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ မနက်စာကတော့ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးရယ်သိပ်မရှိလှပါဘူး။ English breakfast ပေါ့။ ပေါင်မုန့် ၂မျိုးသုံးမျိုးလောက်နဲ့ ထောပတ်၊ ဂျင်၊ Peanut Butter၊ ချောကလက်အနှစ် ချပေးထားတယ်။ Toaster ရှိတယ်။ လိမ္မော်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ English Tea သောက်ချင်ရင် ရေနွေးကရားလေးနဲ့ လာချပေးတယ်။ ချစ်စရာလေး။ ချစ်စရာသာကောင်းတာ ကိုယ်ကတော့ ချဉ်ငံစပ် အသုတ်စားနေကျဆိုတော့ အဆာပြေလောက်ပဲ စားဖြစ်တယ်။
The Oyster Inn's Restaurent
It looks cozy and peaceful
English Tea, Orange Juice and Toast
အမှန်တော့ ကျွန်မတို့ တည်းတဲ့ The Oyster Inn လေးက အင်္ဂါညဆို ပိတ်ပါတယ်။ သူတို့ ဝက်ပ်ဆိုဒ်မှာလဲကြိုရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အခန်းလေးကို အရမ်းသဘောကျတာရော နောက်တစ်နေရာပြောင်းရမှာလဲ အဆင်မပြေတာနဲ့ သူ့မျက်နှာအခြေအနေကို ပြပြီး တစ်ရက်လောက်တိုးနေခွင့်ပြုပါဆိုတော့ သူတို့က ညကျရင်တော့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုလုံး ဘယ်သူမှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ နောက်နေ့ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မနက်စာလဲရမှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ သဘောတူပြီး ဆက်နေလို့ရသွားတယ်။ သူ့ရဲ့ ဖူးရောင်နေတဲ့ မျက်နှာကြီးက သက်သေပဲလေ။ လူတွေက သူ့တွေ့ရင် ရန်ဖြစ်ထားတဲ့ လူမိုက်လားဘာလားနဲ့။ အဖြစ်ကိုသိရင် သိပ်သနားသွားတတ်ကြသေးတယ်။ Attention ရတာ မကြိုက်တဲ့သူ ခုတော့ တစ်လမ်းလုံးက လူတွေရဲ့ အသနားခံဖြစ်နေတယ်။ အကြောင်းစုံသိသွားရင် မင်းမိန်းမက ထိုးလို့ ခုလိုဖြစ်နေတာလားဆိုပြီး နောက်ကြသေးတယ်။ (ငါ့ဘဝ မိအေး၊ မိအေး ငါ့ဘဝ ဘာမှလဲ မလုပ်ရပဲ အလကားနေ လူဆိုးဖြစ်တယ်။ ဂဏန်းအကြောင်းတော့ လူတွေမသိကြဘူး။)
Balcony of the restaurent
Let's go to the Clinic
တည်းခိုခန်းနားက Red Cross ဆေးခန်းကို Dressing လဲဖို့ မနက် ၁၀နာရီခွဲလောက် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးခန်း စာရင်းပေးပြီး ခဏတာစောင့်ရင်း အနားမှာရှိတဲ့ သတင်းစာ ဟိုလှန်ဒီလှန်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာ ခရီးသွား Package တိုးကြော်ငြာတွေမှာ စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုက မြန်မာပြည်ကို ၁၉ရက်ခရီးက နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ 10,300 တဲ့။ နေရာ ၆နေရာပို့ပေးမယ်တဲ့။ ဘေးက ဂျပန်ကို ၇နေရာ ဒေါ်လာ ၁သောင်း ၁ထောင်ကျော် ယူတယ်ဆိုတော့ မြန်မာပြည်ကိုလာလည်ဖို့လဲ တော်တော်ဈေးမသေးသားလို့ ထင်မိသား။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်ကိုသွားရင်ရမဲ့ Service လောက် မြန်မာပြည်က ပေးနိုင်ပါ့မလား? မြန်မာပြည်မှာက ဝန်ဆောင်မှုကျတော့ မကောင်းပေမဲ့ ပြိုင်ဘက်မရှိတာရယ်၊ ဝယ်လိုအားများတာရယ်ကြောင့် ပိုက်ဆံသာများများယူတာ Service ကျတော့ မကောင်းတတ်ကြဘူးလေ။ (ကောင်းကောင်းပေးတယ်ဆိုရင်တော့ မပြောလိုပါဘူးနော်)။ မြန်မာပြည် အခြေခံအဆောက်အအုံ နဲ့ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းလို့ အစစအရာရာ အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးခုလို ဈေးကြီးရတာလို့ထင်တယ်။ တကယ်လို့ ယိုးဒယားလောက်သာရှိမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကနေ ဝင်တဲ့ဝင်ငွေက ယိုးဒယားထက်တောင် သာမယ်လို့ ထင်မိတယ်။
It is not cheap to travel to Burma!
သူ့မျက်နှာက ဒဏ်ရာကို ဆေးထည့်ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းအတွင်းဘက် ပွန်းနေတာကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ပါးစပ်ထဲ ထည့်လို့ရတဲ့ Gel ဆေးရှိတယ်။ ဆေးဆိုင်တွေမှာ မေးကြည့်လို့ရတယ်တဲ့။ ဒါပေမဲ့ ဆေးလက်မှတ်ပေါ် မရေးပေးလိုက်တော့ ခရီးသွား အာမခံကြေးကို ပြန်တောင်းလို့မရဘူး။ ဆေးခန်းခတွေအကုန်လုံးတော့ ပြန်ရောက်တော့ အာမခံကြေး ပြန်တောင်းလို့ရတယ်။ ဆေးခန်းကထွက်လာပြီးတော့ ဆေးရောင်းတဲ့ဆိုင်ရှာရပြန်ရော။ အဲ့ဒိတော့မှ အကုန် လိုရမယ်ရ ပလာစတာတွေ၊ ဆေးမျက်နှာဖုံးတွေ၊ ပါးစပ်ထဲထည့်တဲ့ဆေးတွေ တစ်ခါတည်းဝယ်လိုက်တယ်။ စလုံးကထွက်လာတုန်းက ပလာစတာဝယ်မလို့ စဉ်းစားဖြစ်သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး မဝယ်လာတာ။ အဲ… ပလာစတာဝယ်ပြီးကျတော့ ဘာမှ မဖြစ်တော့ဘူး။ (မဖြစ်တာပဲ တော်ပါသေးတယ်)။
အခြေအနေကြောင့် ဝိုင်ဟီကီမှာ ဒုတိယနေ့ နေလိုက်ရပေမဲ့ အဲ့ဒိနေ့ဝက်လောက်က ဘယ်မှလဲ မသွားဖြစ်ပါဘူး။ သူ့ဆေးတွေကလဲ အိပ်ဆေးပါနေတော့ ကောင်းကောင်းနားပါစေဆိုပြီး ၂ယောက်သား ဆေးခန်းက ပြန်ရောက်တာနဲ့ ပြန်အိပ်ကြပါတယ်။ သူကတော့ ဆေးအရှိန်ကြောင့်ပေမဲ့ ကျွန်မကတော့ ဘာကြောင့်မှန်း မသိ အိတ်ကောင်း စားကောင်းအမြဲလိုလိုပါပဲ။ ရာသီဥတုလေးက အေးအေး လူကလဲ ဒီခရီးစစီစဉ်ကတည်းက စိတ်ရော လူရော မနားရတော့ ခုမှ စိတ်ဒုံးဒုံးချ နားလိုက်မိတယ်ထင်ပါတယ်။
Lunch and A visit to Onetangi Beach
Set Lunch Menu, what do you want?
Inside RedCrab Thai Restuarant, Oneroa Beach
So tell me what are you looking at?
ညနေ ၂နာရီခွဲလောက်မှ နိုးလာတော့ နေ့လည်စာစားဖို့ သတိရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂ယောက်သားပြင်ဆင်ပြီး အနားက ယိုးဒယားစားသောက်ဆိုင်ကိုပဲ ရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ အေးဆေး စားသောက်ပြီး ညနေ ၃နာရီခွဲလောက်ကျမှ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ဝိုင်ဟီကီကို လျှောက်ပတ်ကြည့်ပြီး ရောက်ရာပေါက်ရာသွားဖို့ ၂ယောက်သား သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ သူလဲ နှုတ်ခမ်းသာ ပွန်းပြီး ယောင်နေတာ လမ်းလျှောက်နိုင်နေတာပဲလေ။ ဒါနဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်သွား အဲ့က မြေပုံကြည့်ပြီး လာတဲ့ကားပေါ်တက်ပြီး အချိန်မှီပြန်လာလို့ရမဲ့ နေရာသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ကားလာတဲ့အချိန်အတိအကျကိုလဲ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ ကပ်ထားပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံက အတော်လေးကို အချိန်တိကျတဲ့နိုင်ငံပါ။ လာတဲ့ကားကို တက်စီးပြီး ဝိုင်ဟီကီကျွန်းရဲ့ အကျယ်ဆုံး ကမ်းခြေ Onetangi ကို ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Bus Timetable for your info. Of course it would be difference for each bus stop
Here is Waiheke Map
Hello Onetangi Beach!!!
Lover in Onetagi Beach
ညနေလဲစောင်းနေ၊ အလည်အပတ်ရာသီလဲ မဟုတ်တော့ ကမ်းခြေမှာ ဘယ်သူမှ မရှိပြန်ပါဘူး။ ကျွန်မတို့နဲ့အတူ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ အနောက်တိုင်းစုံတွဲနဲ့ ကျွန်မတို့ပဲရှိပါတယ်။ ကမ်းခြေက Oneora နဲ့ယှဉ်ရင် ကျယ်ပါတယ်။ လှိုင်းသိပ်မရှိဘူးမို့ ရေကူးဖို့ ကောင်းတယ်လို့ သူ့ဝက်ဆိုဒ်မှာရေးထားတာတွေ့ပါတယ်။ ခုကတော့ ဆောင်းတွင်းဝင်ကာစဆိုတော့ ဘယ်သူကူးရဲမလဲနော်။ ရေထဲဆင်းဖို့မပြောနဲ့ ဘတ်စ်ကားထဲက ထွက်လိုက်တာနဲ့ ပင်လယ်လေအေးခပ်ပြင်းပြင်းရဲ့ အထိအတွေ့နဲ့တင် ကျောထဲ ချမ်းစိမ့်တက်သွားတယ်။ ပဲများချင်လို့3Quarter ဘောင်းဘီက ခြေသလုံးအလယ်ထိပဲဖုံးတော့ လွတ်နေတဲ့နေရာက အေးခနဲပဲ။ ဒါပေမဲ့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ နေသားကျသွားတော့ သိပ်မချမ်းတော့ဘူး။ ကျွန်မတို့ကတော့ ဘတ်စ်ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေတာနဲ့ ကျွန်မတို့နဲ့ အတူဆင်းတဲ့ အတွဲကတော့ ၂ယောက်သားချမ်းချမ်းနဲ့ ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်သွားပြီး ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူး။ ပင်လယ်ပြင်ကို မျက်နှာမူပြီးဆောက်ထားတဲ့ မှန်ဘန်ဂလိုတွေ ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ရှိတယ်။ လူတွေတော့ နေနေတာ မတွေ့ဘူး။ ဟော်တယ်တွေရှာတုန်းက အဲ့ဒါတွေထင်တယ် တွေ့တယ်။ ဈေးကြီးတယ်။ သူက romantic ပုံစံ ရှုခင်းလှလှ ဆိုတော့။ ဒါပေမဲ့ မတည်းလိုက်တာ မှန်တယ်ထင်တယ်။ ကမ်းခြေတစ်ခုလုံး ဘာဆိုင်မှ မတွေ့ဘူး။ အင်တာနက်မှာတော့ Onetangi beach မှာ Café, restaurents and Vineyards တွေရှိတယ်လို့ပါတယ်။ ရာသီချိန်မဟုတ်လို့လား၊ ကိုယ်ပဲရှာမတွေ့ခဲ့တာလားတော့ မသိဘူး မတွေ့ခဲ့ဘူး။
Give meabig hug, bae bae
My another wishful holiday Villa, Of course I will let my readers stay there if i own one :P
Feel... Feel bro... :P
Trees at Onetangi
The whole beach was all ours!
ကမ်းခြေရဲ့ ဟိုဘက်အဆုံးမှာ ဆင်းပြီး ဒီဘက်အစထိ လမ်းလျှောက် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အဲ့ဒိက ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာပဲ ပြန်စောင့်တယ်။ ဘတ်စ်ကားပြန်စောင့်ရတာက နာရီဝက်လောက်ပြန်ကြာတယ်။ စောင့်နေတဲ့တချိန်လုံး ဖုန်းနဲ့ မေတ္တာသုတ်ဖွင့်ထားလိုက်တယ် အေးရော။ လူလဲတစ်ယောက်မှ မရှိ ကိုယ့် Mr.Right က အပြဲအကွဲနဲ့ဆိုတော့ ဘာထပ်ဖြစ်အုံးမလဲဆိုတာက ခပ်ကြောက်ကြောက်။ မေမေကတော့ ကိုယ့်အတွက် ယတြာတွေလုပ်ပေးနေလို့ထင်တယ် အဲ့ဒိနောက်ပိုင်း ဘာမှထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ (ဒါနဲ့ မေ့မေ့ဆီမှာ မှင်စက်ချ ဗေဒင်မေးချင်တယ်ဆို 67834142 ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ဘွတ်ကင်တင်လို့ရတယ်လို့ ကြော်ငြာဝင်ပရစေ) ပျင်းပျင်းနဲ့ Selfie ရိုက်။ သူက နေမကောင်းချင်သလိုဖြစ်နေတာရော၊ ဆေးရှိန်တွေကြောင့်ရော သိပ်မလန်းဘူး။ ဓာတ်ပုံလဲ ရိုက်ချင်စိတ်ဘယ်ရှိမလဲ။ ဒါပေမဲ့ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အမှတ်တရအနေနဲ့တော့ ရိုက်သင့်တယ်ထင်တာပဲလေ။ ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ ခရီးသွားပုံတွေကို ဖေ့ဘွတ်ပေါ်ကနေ သူ့မိသားစုတွေကလဲ အချိန်နဲ့ တပြေးညီကြည့်နေတာဆိုတော့ သူ့ပုံမတင်ရင် တစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး စိတ်ပူနေကြမှာလေ။ အာ့ကြောင့် သူ့နောက်ကျောကနေပဲ ဓာတ်ပုံလစ်ရင် လစ်သလို ခိုးရိုက်လိုက်တယ်။
Oh, the tree look beautiful, let me takeapicture
Here is the picture taken by my phone
I wanna take picture with this tree (Taken by our new Samsung camera)
A good place to miss someone
Do you wanna BBQ in this cold weather? I think it would be awesome to eat hot baked Sweet Potato!
A Cave of the sea gods??? Interesting...
Boring... So I am playing around alone by selfie(ing)
I can have my joyful time like this too... haha
Dinner at Red Crab again (There's no other choice! all other shops closed)
Yummy Phathai (Although I hate raw bean sprout)
ညနေ ၅ခွဲလောက် ဘတ်စ်ကားလာတော့ Oneroa ကိုပြန်စီးရင်း ကားပေါ်မှာတင် ညနေ၆နာရီထိုးတော့ မိုးချုပ်သွားရော။ ညစာ စားဖို့ တခြားဆိုင်တွေလိုက်ရှာသေးတယ်။ အကုန်ပိတ်တာကပိတ် မပိတ်တာကလဲ Bar လိုလို ဆိုတော့ နောက်ဆုံး ယိုးဒယားဆိုင် တစ်ဆိုင်ပဲရှိလို့ အဲ့ပဲ ထပ်စားဖြစ်ပြန်ရော။ အဲ့ဆိုင်ရှင်တောင် ကျွန်မတို့ကို အတော်လေး သိနေပြီ။ ညပိုင်းကျတော့ သူ့ဆိုင်မှာ ကျွန်မတို့အပြင် ၃၊ ၄ ဝိုင်းလောက်ရှိတယ်။ ဝိုင်နဲ့ ထိုင်းစာနဲ့ ဟုတ်နေတာပဲ။ သူတို့က သောက်တာကများ။ ကိုယ်ကတော့ စားတာက များတယ်။ စားပြီးသောက်ပြီး အနားက Convenience store လေးဝင်ကြည့်ပြီး သရည်စာမုန့်လေးဘာလေးဝယ်၊ Indofood က မီဂိုရင်း ဗူးလေးတွေ့လို့ ဝယ်ဖြစ်သေးတယ်။ အဲ့ည အခန်းထဲ လုပ်စားဖြစ်တယ်။ တည်းခိုခန်းတစ်ခုလုံး ဘယ်သူမှ မရှိ အဆောင်တစ်ခုလုံး ကိုယ်တို့ ၂ယောက်တည်းနဲ့ ဟန်းနီးမွန်းညလေး တစ်ညကို အိပ်ယာပေါ်ကနေ တီဗွီကြည့်ရင်း အိပ်ပျော်ဖြတ်သန်းလိုက်တယ်။
He didn't felt like taking picture, But I annoyed him
Whatever happen, I must make sure to capture our momemts!!!
Posted by mabaydar at 10:43 PM
နႈတ္ခမ္းကြဲနဲ႔ ပံုပံုရိုက္ေနရွာတယ္ Mr right ရယ္ သနားပါတယ္ဟယ္
မေဗဒါခရီးသြားပို႔စ္ေတြ အမ်ားစုက ဂ်ပန္ ကိုရီးယား ထိုင္း အကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ေတြသြားတာဆိုေတာ႔ လူေတြမ်ား ၾကည္႔စရာလည္စရာကစံုနဲ႔ အျမဲပဲ စာေရးသူရဲ႔ လူေတြခရီးသြားေတြအေပၚအျမင္ေတြ (ျပည္ႀကီးတရုတ္ေတြ အဆိုးဆံုး ဟားဟား) ဆက္သြယ္ေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈကဘယ္လို ဘယ္ tourist attraction က ၾကည္႔ဖို႔တန္တယ္ မတန္ဘူးေတြ ဖတ္ေနက်ေလ အခု နယူးဇီလန္ခရီးက တစ္ပံုစံကြဲထြက္တယ္ ခုနကေျပာတာေတြ သိပ္မပါဘူး သဘာဝရႈခင္းပံုေလးေတြနဲ႔ enjoy the moment လုပ္ေနတဲ႔ ဖီလင္ေလးကိုပဲခံစားရတယ္ (ေအာ္ဆီခရီးေတာင္ ဒီေလာက္မျငိမ္းခ်မ္းဘူး) ဝိုင္းေတာ႔ ဖူးခက္ေတြ ဆိုးလ္ေတြ သိပ္သြားခ်င္ေပမယ္႔ (အာရွစာေတြငတ္လို႔) အဲဒါေတြသြားလို႔ဝရင္ ေနာက္ပိုင္း ဒီလိုစိတ္ေအးလက္ေအးေနရာေလးေတြပဲသြားမယ္ကြယ္
8/15/2015 12:29 AM
@Wine - ဟုတ္တယ္၀ိုင္းေရ... အဲ့မွာက် Local ေတြအားလံုးကလဲ သေဘာေကာင္း၊ ကိုယ့္ကို annoyed လုပ္မဲ့ ခ်ိဳင္းနားေတြကလဲ ခပ္ရွားရွား ရွိရင္ေတာင္မွ သူတို႔က လူနည္းစုဆိုေတာ့ အေနအထိုင္ ဆင္ျခင္ၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ခပ္ေအးေအးျဖစ္ေနတာကေတာ့ ခရီးသြားေဖာ္ ေအးတာနဲ႔ ဆိုင္မလားမသိပါဘူး။ ကိုယ့္အစ္မေတြ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔သြားရင္ေတာ့ အဲ့ေလာက္ေအးျဖစ္မလား၊ ဘယ္သူမွ မရွိတဲ့ ေနရာေတြမွာ လက္လက္စင္ေအာင္ ေဆာ့ၾကမလားေတာ့ မသိဘူး။ မေဗဒါကေတာ့ ခရီးဆံုးခါနီးေလး ပ်င္းလို႔ ကိုယ္နဲ႔ ခရီးသြားေနက် သူငယ္ခ်င္းကို လြမ္းတယ္ဆိုလို႔ Mr. Right က lesbian ေတာ့ မလုပ္ပါနဲ႔ေနာ္ဆိုျပီး ၾကံဖန္စိတ္ပူေနေသးတယ္။ သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ဆို ဘာရယ္မဟုတ္ ေတြ႔သမွ်လူေတြအေၾကာင္းထိုင္ေျပာေနရင္ေတာင္ အေပးအယူရွိျပီး သိပ္မပ်င္းဘူး။ ကိုယ့္အစ္မနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့ အျငင္းပြားရင္ ပြား၊ မပြားရင္ ေဆာ့။ မေဆာ့ရင္ စား။ ပ်င္းခ်ိန္မရွိ... New Zealand က မိသားစုလိုက္ လာရင္ ပိုေကာင္းမယ္။ လူၾကီးေတြနဲ႔ ေအးေဆးနား ေလေကာင္းေလသန္႔ရွုဳ ရွဳခင္းေတြၾကည့္...
8/15/2015 12:41 AM
က်ြန္းကေလးကုိ မေဗဒါတုိ႔ ေမာင္နွံနဲ႔ အတူ လုိက္လည္ခဲ့ပါတယ္။ ေနရာေလးက တိတ္ဆိတ္ ေအးခ်မ္းေနတာပဲေနာ္။ ကၽြန္းကေလးမွာ ႏွစ္ေယာက္တည္းေပါ့....
8/17/2015 10:41 AM
@ျငိမ္းမိန္းကေလး - ဟုတ္တယ္။ တကယ္ကို ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ေလေကာင္းေလသန္႔ရခ်င္တယ္။ လူေတြအမ်ားၾကီးနဲ႔ အေ၀းမွာ လြတ္ေျမာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ နယူးဇီလန္ကို ခရီးထြက္သင့္တယ္။
8/17/2015 6:28 PM